SIYAASADDA soo celiyo -
This policy governs your purchase of ExactSpy – the smartphone monitoring application. Fadlan akhri si taxadar leh ka hor amarka sida qeexayaa xuquuqda aad leedahay ee la xiriirta in aad soo, oo ay ku jiraan xadad u muhiim ah iyo ka reebida. Your meelaynta ee amar ka dhigan heshiis aad in si loo maamulo heshiiskan.
Haddii aadan ku qancay waxa aad iibsatay oo ka mid ah software iyo adeegyada, aad dib ugu heli karto lacag dul shuruudaha iyo xaaladaha ku xusan hoos ku. Si kastaba ha ahaatee, waxaan aaminsanahay in inta badan soo celiyo waa laga hortagi karaa haddii aad u hesho caawinaad xirfad leh ka khubaro noo.
XAALADAHA soo celiyo
Subject in this xaaladaha Policy celinta, Waxaa laga yaabaa in aad xaq u leedahay in laguu soo celiyo dhan ah 5 maalmood maalinta aad iibsatay ka dib markii ay bixisay sababaha aad uma horimaanaya xaaladaha Policy celinta.
Soo celiyo No laga heli doonaa ka dib markii muddo soo celiyo taasi waa ka badan.
Waxaan ma soo saari celinta ee si fudud aad maskaxdaada la beddelo. Haddii aad la kulanto arrimo dhinaca farsamada ah oo naga software, waxaan aad ula shaqeeyaan si ay u xaliyaan arimahan si ku habboon. Haddii arimahan aan lagu xalin karin, waxaad heli doontaa soo celiyo haddii software la caddeeyo haleysan. Waxaan xaq u leenahay in la soo celin amar iyo taageerada iyo adeegga dayn haddii aad noo soo halis ama aan ogaado aad isticmaasho adeegga ujeedooyin diiday.
Celinta No la soo saari doonaa si ay macaamiisha kasta oo ama aan awoodin ama diyaar u ahayn in jailbreak ay iPhone iyo / ama iPad. The hage rakibaadda bogga macruufka internetka si cad u qeexaysaa in dhammaan iPhone iyo / ama iPad waa in la jailbroken ka hor rakibaadda iyo sidoo kale, barta ay la iibsaday, macaamiisha uu ogolaado in looga baahan yahay.
Haddii macaamil ah wuxuu iibsanayaa software iyo ma qabo aan dabranayn (oo ay ku jiraan qufulo, passcodes, iwm) si telefoonka waa in lala socdaa, ma waxaan ku waajibaysa loogu soo celiyo sabab u ah xaaladda this.
Haddii a user phone diirada u beddela side iyo waxaa ka dhasha khasaare qayb ahaan ama gebi of isku xirnaanta internet, updates OS or restoring to factory settings and consequently incorrect ExactSpy functioning, celinta ma la sidoo kale la soo saari doonaa.
Macmiil kasta oo sheeganaya in ay sameeyeen wax iibsiga ee gudbiyey warbixin been ah qalad ama in ay soo celiyo wax lumiyo doono xaqa ay u leeyihiin iyo waxa la qaban doonaa masuul dhammaan kharashaadka macaamil lacageed. Fadlan la soco in mar aad galaan wareegga biil subscription cusub, celinta lama siin doono, waayo, wakhtiga cusub.
Maxaa yeelay, dhammaan amarada la dul dhigo xaaladda Khilaafaadka, aad qabto 14 maalmood muddo ah si loo xaliyo xaalada leh Kooxda Taageerka macaamiisha. Haddii aad ku guul dareysato in ay bixiyaan macluumaadka loo baahan yahay ama feedback waqti gudahood uu bixiyo, khilaafka waa la tirtiri doonaa iyo soo celiyo ma noqon doonaa macquulsan..